Momba anay - TAYSHINE Technology Co., Ltd.
TAYSHINE Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2012, miaraka amin'ny velaran'ny faritra 5000 metatra toradroa, izahay dia orinasa fanaovana fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny olon-dehibe, famokarana sy varotra, ny vokatra lehibe indrindra dia atody Vibration, vibrator, Prostate Massager, Anal Plug, Sex Dolls, Kegel Ball, sns .
Ny mpanjifanay lehibe dia avy any Amerika Avaratra, Eropa, Azia atsimo atsinanana.
Manana rafitra fitantanana kalitao siantifika feno izahay, tatitra momba ny fitsapana ny vokatra, ary ny kalitaon'ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpanjifanay ary afaka hihaona amin'ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy mitohy.
Izahay dia mandray tsara ireo namana hitsidika sy hitarika ny ozininay ary manantena ny hanana fifandraisana maharitra miaraka aminareo.
TAYSHINE Technology Co., Ltd. Niorina tamin'ny taona 2012, dia mpanamboatra kilalao ara-pananahana matihanina, miaraka amin'ireo mpiasa 50 miara-mitombo, ankehitriny dia eo amin'ity tsipika ity efa ho 8 taona izahay ary lasa iray amin'ireo mpanamboatra kilalao firaisana ara-nofo lehibe indrindra ao Shina.
Ny vokatra manarona vibrator, Wand Massager, Prostate Massager, ball kegel, Sex Dolls, sns. Miaraka amin'ny ekipa R&D misy mpikambana 10 dia mamoaka zavatra vaovao tsy tapaka izahay ary manome fahafaham-po ny mpanjifa maro amin'ny tetik'asa ODM sy OEM. QUALITY, ny tena manan-danja indrindra, Ny ankamaroan'ny entantsika dia nandalo ny fanamarinana FDA, CE, RoHS, ary SABS
Kilalao fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy, vibrator bitro, Vibrator G-Spot, Vibrator klitoraly, Kilalao fanaovana firaisana ara-nofo ho an'ny olon-dehibe, Silibratera Vibrator,